Maxay tahay sababta ka baajiyey Madaxweyne Xasan inuu dhameystiro safarkiisa dalka deriska gaar ahaan Kenya – idalenews.com
Madaxweynaha dawlada Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayey oo ku sugnaa wadanka Itoobiya ayaa galabta dib ugu laabtay magaalada Muqdisho kadib markii la baajiyey socdaal uu maanta madaxweynuhu ku iman lahaa wadanka Kenya.
Wasiirka arimaha dibadda Soomaaliya Marwo Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan oo toddobaadkii hore booqasho ku tagtay magaalada Nairobi ayaa sheegtay in warqad martiqaad rasmi ah ay ka heshay dawlada Kenya taasoo madaxweynaha jamhuuriyada Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku booqano wadanka Kenya si uu kulan ula yeesho dhigiisa wadanka Kenya Mwai Kibaki.
Martiqaadka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa rasmi ahaan u fidiyey wasiirka arrimaha dibadda Kenya Sam Ongeri oo maalinimadii Talaadada kulan la qaatay Marwo Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan. Kulankaasi waxaa kaloo looga dhawaaqay in labada dawladood ay ku heshiisyeen inay hagaajiyaan xiriirkooda dhanka diblomaasiyadda iyo amniga oo waayadanba aan fiicneyn.
Haddaba maxaa iska bedelay booqashadii madaxweynaha ee Kenya?
Ilo wareed ku dhow Villa Soomaaliya ayaa Idale News u sheegay in saaka markii wafdiga madaxweynuhu isu diyaariyeen inay u duulaan Nairobi lagu soo wargeliyey in dawlada Kenya aaney diyaar u ahayn qaabilaada madaxweynaha Soomaaliya, sababo lagu tilmaamay dhanka farsamada darteed sidaasi awgeedna waxaa qoraal la soo marsiiyey safaaradda Soomaaliya ee Addis Ababa lagu soo wargeliyey in dib loogu dhigo booqashada madaxweynaha Xasan DSheekh Maxamuud ee Kenya.
Kulankii wasiirada arrimaha dibadda Kenya iyo Soomaaliya.
Wararka aan ka heleyno ilo wareedka ayaa intaa ku daray in sababta Kenya ay uga laabatay qaabilaada madaxweynaha ee ay u horey u ballanqaaday ay tahay khilaaf soo cusboonaaday oo ka dhex oogmay guddiga farsamo ee diyaarinta maamul u sameynta Jubbooyinka oo taageero ka helaya Urur Goboleedka IGAD iyo madaxtooyada Soomaaliya. Guddigaasi ayaa toddobaadkan sheegay inay dhameeyeen maamul dhisidii Jubbooyinka taasoo qeyb ka mid ah IGAD ay taageertay.
Taageerada IGAD ay siiyeen guddiga maamul u sameynta Jubbooyinka ayaa waxaa sii xoojiyey kadib markii 27-kii bishan oo ku beegneyd Talaadadii magaalada Kismaayo ay booqdeen wafdi ka socday IGAD oo qeyb ka ah hawlaha maamul dhisida Jubbooyinka kuwaasoo la kulmay xubno uu ka mid yahay Sheekh Maxamed Yuusuf Aw-Liibaax oo Kismaayo ku sugan.
Waxaa ilo wareedku u xaqiijiyey Idale News in guddiga farsamada ee diyaarinta maamulka gobollada Jubbooyinka oo hadda ku kulansan Nairobi (oo la rabay in madaxweynuhu isku arkaan Nairobi) ay sheegteen inaanay hadda diyaar u ahayn hor fariisiga madaxweynaha iyo wafdigiisa booqashada ku imaanaya Nairobi.
Xubnaha guddiga ayaa dawlada Kenya u sheegay in mudo toban maalmood ah ay u baahan yihiin si ay u diyaarsadaan qorshayaasha ka dhiman habka maamul u sameynta gobollada Jubbooyinka kaasoo mudooyinkanba laga waday dalka Kenya.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaan ku faraxsaneyn qaabka ay u shaqeynayaan guddiga farsamada ee maamul u sameyna Jubbooyinka, kaasoo caadi ahaan dawladu ay u aragto guddi aan metelin dada deegaanka isla markaana ay gadaal ka riixeyso dawlada Kenya, waxaana dhanka kale ay dawladu waday qorshe kulamada Nairobi hadda ka socda loogu soo wareejinayo gudaha dalka.
Mid ka mid ah ka qeybgalayaasha shirka oo aan rabin in magaciisa la xigto maadaama uusan saxaafadda la hadalkeeda u fasax qabin, ayaa Idale News u sheegay in kulankan oo ah wadatashi ay ka qeybgalayaan odayaal, dhalinyaro iyo haween ka soo jeeda beelaha dega gobollada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo Gedo oo ah saddexda gobol ee maamulka loo dhisi doono.
Dhageyso: Safiirka Somalia ee Kenya Ali Ameriko oo sheegey in Madaxweyne Xasan dhawaan booqasho rasmi ah ku tagi doono Kenya